Ndi Noobs na-enye gi nsogbu? | Martech Zone
Otu uru (ụfọdụ mmadụ na-eche na ọ bụ ọbụbụ ọnụ) nke ịbụ onye maara ihe riri ahụ, ọ bụ na onye ọ bụla na-arịọ gị maka enyemaka mgbe niile. Ezi enyi m na Hoosier ibe m, Patric aka Mazi Noobie, kwadebere nke ọma ibupụ ibu a n'ubu gị! Patric nwere weebụsaịtị na - eto eto, Noobie, n’afọ gara aga mana ọ ga - agbanwegharị ọhụụ ma malitekwa dị ịtụnanya!
Noobie, Inc. nwere ihe nlere, odi na pọdkastị vidiyo, edemede na ọbụlagodi ihe omume. Na-eche ihe esemokwu dị n’etiti iPhone na iPod Touch na-? Noobie, Inc. nwere azịza!
Ọtụtụ afọ gara aga, enwere m saịtị akpọrọ "Inyere Aka" nke m rere maka obere mgbanwe. Ha tụgharịrị na teknụzụ ọ wee bụrụ saịtị ga-enyere gị aka ịkwụsị ị smokingụ sịga. Noobie, Inc. bụ ihe m tụrụ anya na Inye Aka ga-abụ. Ekele Patric!
Tupu ịhapụ ọkwa a - gbaa mbọ hụ na ị zigara ndị mụrụ gị, ụmụnne gị nwoke, ụmụnne gị nwanyị na ndị ọrụ ibe gị ozi njikọ Noobie, Inc.. I nwekwara ike denye aha na Kedu ihe Blog dị!
Ka Patric lekọta ihe ọhụrụ na ndụ gị!
Tags: infographics isi mmaliteMobile na Mbadamba ụrọnchebe oziịrụ ọrụ onwemebere nnyemaakaọrụ onwe onye web
Gingde blọgụ ezughị, "Pịa anụ ahụ"!
Mee 23, 2008 na 3: 35 PM
Kedu ezigbo nkwado saịtị, daalụ.
Aga m ekerịta nke ahụ na ndị na-ekiri m.
Mee 23, 2008 na 3: 43 PM
Daalụ maka nnukwu ederede. Ọ bụ nnukwu saịtị maka onye ọ bụla ebe ọ bụ na teknụzụ ọhụụ na-agbadata na anyị chọrọ enyemaka na mmụta.